अमेरिकको जागिर छाडेर नेपालको पूँजीबजारको अभिवृद्धिमा फर्केका युवा - Arthasansar
मंगलबार, ०९ मंसिर २०७७ | Tuesday, November 24, 2020 IPO Result
अमेरिकको जागिर छाडेर नेपालको पूँजीबजारको अभिवृद्धिमा फर्केका युवा
मंगलबार, २५ बैशाख २०७५, १० : २७ मा प्रकाशित
सौरभ तिमिल्सिना, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भिवोर क्यापिटल लिमिटेड
अर्थ संसार :
उनलाई नपुग्दो केही पनि थिएन । काठमाडौँको रैथाने परिवार, पढाई पनि राम्रै थियो । पारिवारिक रुपमा पनि उनी सबल नै थिए । आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवार भन्न पनि सकिन्थ्यो । अमेरिका पुगेका थिए । उता पनि राम्रै थियो । पैसाको दुःख पनि थिएन । जिन्दगीमा पाउनुपर्ने ऐश आराम पनि पाएके थिए । शान थियो, सौकत थियो । नाम भने थिएन । नेपाली परिचय थियो ।
राजधानीमा नै जन्मे हुर्केका उनलाई जीवनले धेरै कुरा सिकाएको थियो । मान्छेका चरित्र र व्यवहारलाई समेत राम्रैसँग जान्ने बुझ्ने बनाएको थियो । बुबा राजप्रसाद सेवाका कर्मचारी थिए । समाजमा शान सौकत पाएकै थिए ।
अमेरिको प्रतिष्ठित संस्थामा जागिर थियो, । ६ वर्ष भन्दा बढी अमेरिकामा सिकेको ज्ञान र सिपालाई प्रयो गरेर देशभित्रै केही गर्ने हुटहुटी उनको मनमा थियो । पैसा , शान, सौकत छाडेर आउने कि नआउने भन्ने दोधारमा समेत थिए उनी । तर भित्र मनले भन्यो सौरभ आखिर तँ जन्मेको त नेपाली भएर नै हो नी । नेपाली हुनुमा जति मज्जा अरुमा कहाँ पाइन्थो र । मन र दिमागबीचको लामो अन्तरद्वन्द्वपतिछ उनले एउटा निकास निकाले र भने म अब नेपाल फर्कन्छु ।
अमेरिकाको भाग दौडबाट उनी काठमाडौँ उडे । देशमै केही गर्ने लक्ष्य लिएर अमेरिकामा सिकेको ज्ञान आफ्नौ साथमा थियो । व्यवािसयक दक्षता पनि सँगै थियो । मात्रै चाहिएको थियो अवसर । कहाँ जागिर पाइएला भन्ने सोचेर उनी आएका थिएनन् । दशेभित्र जाँउ मेरो योग्यता र क्षमता अनुसारको काम त पाइएला नी भन्ने दृढ विश्वास भने थियो मननमा । उनी अर्थात् सौरभ तिमिल्सिना ।
नेपालको धितोपत्र बजार निकै उतार चढावपूर्ण रहेको छ । बजार निरन्तर घट्ने र सामान्य बढ्ने चक्रमा रहेको छ । शेयर बजारमा नागरिकको विश्वास पछिल्लो दिनमा खस्किएको छ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर समेत बिक्न छाडेको छ ।
अमेरिकाबाट फर्केको सुनेर केही साथी भाईले त गिज्याए रे उनलाई । कति मान्छे अमेरिका जान मरिहत्ते गर्छन्, तँ भने किन फर्केको भन्दै उडाए रे उनलाई । सौरभले भने देशभित्र हरेक क्षेत्रमा देखिएको विकृति , विसंगतिका कारण पनि नेपालीको सोच त्यस्तो भएको हुन सक्छ, उनले भने ।
अमेरिकाबाट फर्केको केही समय त्यत्तिकै बसे । भिवोर बैंक एक समय नेपाल भित्र वाह वाही पाएको बैंक थियो । ग्राहकको मन समेत जितेको थियो । तर, आन्तरिक समस्याका कारण सो बैंक नराम्ररी समस्यामा पर्यो । ग्राहक पैसा निकाल्न र आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न लामै लाइन पनि लागे । व्यवसायमा इमान्दरिता भएन भने समस्या पर्दो रहेछ । आखिर भिवोरमा भएको त्यही थियो ।
दुःखका दिन सकिए, पुनः संलिन थाल्यो बैंक । विगतको इतिहासलाई बिर्सेर पुनः व्यवसायिक दक्षताका साथ काम गर्ने योजनामा केही लगानीकर्ता लागे । पुनः विश्वास कमाउँदै गएको छ बैंकले ।
सोही बैंकले शेयर लगानीलाई व्यवस्थित गर्न भिवोर क्यापिटल पनि खोलेको थियो । नेपालको मर्चेन्ट बैंकमा भिवोरको नाम पूरानो हो । तर, बैंक समस्यमा परेपछि मर्चेन्ट पनि समस्यामा पर्ने नै भयो । वातावरण सहज बन्दै गएपछि समस्यामा परेको क्यापिटललाई पनि नयाँ रुपमा अगाडि बढाउने सोच व्यवस्थापनले बनायो । त्यही सोचलाई साकार बनाउने लक्ष्यका साथ नियुक्त भए सौरभ । हाल भिवोर क्यापिटलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा सौरभ कार्यरत छन् ।
नेपालको धितोपत्र बनार निकै उतार चढावपूर्ण रहेको छ । बजार निरन्तर घट्ने र सामान्य बढ्ने चक्रमा रहेको छ । शेयर बजारमा नागरिकको विश्वास पछिल्लो दिनमा खस्किएको छ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर समेत बिक्न छाडेको छ ।
नागरिकलाई पुनः धितोपत्र बजार सुरक्षित छ, यसले भावी दिनमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ भनेर आर्कषित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सौरभले सम्हालेपछि सुस्ताएको भिवोर क्यापिटल पुनः जुर्मुराएको छ । नशा नशामा प्रवाह भएको छ उत्साह । अनि व्यवसायिक वातवारण पनि बनेको छ । दक्ष , योग्थ्य कर्मचारी चयन गरिएको छ । इमान्दार प्रयत्न गरियो भने सफल हुन सकिन्छ भन्ने मन्त्रलाई राम्रैगरी पच्छयाएका छन् तिमिल्सनाले ।
अमेरिकाको प्रविधि, ज्ञान र त्यहाँ प्रयोग भएका धितोपत्र बजारका नयाँ एवम् नविनत्तम खोजलाई नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ, पूँँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ र सरकारले भने जस्तै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सोच सौरभमा छ ।
इमानदार प्रयत्न, व्यवसासयिक र जिम्मेवार व्यवस्थापन तथा ग्राहकको सन्तुस्टिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने सफल हुन सकिन्छ भन्ने गुरु मन्त्रलाई आत्मसात् गरेका सौरभले जिन्दगी भर सिकेको सबै ज्ञान भिवोरमा खन्याउने संकल्प गरेका छन् ।
नेपालको सुस्ताएको पूँजीबजारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र थप प्रडक्टको समेत खोजीमा लागेका छन् उनी । उनी भन्छन् हामी विस्तारै बण्ड भिडभेन्चर, भेन्चर क्यापिटललगायतका सेवामा पनि जानु पर्छ, राज्यले त्यता तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।
हाम्रो धितोपत्र बजार सानो छ, प्रडक्टहरु पनि थोरै छन्, यसलाई थप विस्तार गर्दै समृद्ध बनाउने दायित्व हामी सबैको हो । मर्चेन्ट बैंकले पनि धेरै गर्न सक्छन् । भिवोरलाई पुनः एक नम्बरको मर्चेन्ट बैंक बनाउने र नेपालको धितोपत्र बजारलाई थप विस्तार एवम् व्यवस्थित बनाउन लाग्ने उनको संकल्प छ ।
विगतमा सुस्ताएको भिवोरले पछिल्लो ६ महिनामा तीन वटा कम्पनीको शेयर रजिस्टारको काम गरेको छ । त्यसमा लुम्बिनी विकास बैंक, ललितपुर फाइनान्स र मिशन डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन् ।
यस्तै अरुण काबेली, अरुण भ्याली, रिडी हाइड्रोपावर कम्पनी, अपि, रैराङ जस्ता प्रतिष्ठित जलविद्युत् कम्पनीको शेयर व्यवस्थापक एवम् रजिष्टरको रुपमा काम गरेको छ । शेयर कारोबार एवम् व्यवस्थापनलाई एकाध मिनेटमा नै सम्पन्न गरिदिने गरी व्यवसायिक कर्मचारीको टिम तयार पारिएको छ ।
यस्तै घलेम्दी हाइड्रो पावरको पनि भिवोरले बिक्री प्रबन्धकको रुपका काम गरेको छ । भिवोर मर्चेन्टको कार्यालय पनि राजधानीको मुटु थापालीको ट्रेड टावरमा रहेको छ । जताबाट पनि सहजै रुपमा आउन सकिने प्राइम लोकेशनमा कार्यालय रहेको, शेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एकाध मिनेटमा नै सक्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
उनले शेयर बजारको विस्तारमा सरकार, सरकारी निकाय, शेयर दलाल कम्पनी, लगानीकर्ता सबैले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढेको खण्डमा मात्रै सफल हुन सकिने उनको भनाइ छ ।
आक्रामक रुपमा बजार विस्तार एवम् व्यवसायिक दक्षतालाई केन्द्रमा राखिएको छ । चुस्त कर्मचारी संयन्त्र बनाउने देखि कसरी बढी भन्दा बढी सेवा उपभोक्तालाई दिन सकिन्छ भनेर सौरभ लागेका छन् । उनलाई भिवोर क्यापिटलका लगानीकर्ताले पनि राम्रै साथ दिएका छन् । किनकी विगतमा गुमेको साख फर्काउरु अब्बल सावित गर्न राम्रै मेहनतको जरुरी पर्दछ ।
सबै कामलाई विद्युतीय प्रणालीमा हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । शेयर बिक्री प्रबन्धक भएपछि सबै ग्राहकलाई सन्तुस्ट हुने गरी काम गर्ने वातावरण तयार पारिएको छ । सौरभ भन्छन् हामी दिन प्रतिदिन सफल हुँदै गएका छौ, धेरै भन्दा धेरैले विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौ ।
भिवोर क्यापिटललाई नेपालको उत्कृष्ठ एवम् व्यवािसयक रुपमा सफल क्पाटिल बनाउने उनको सोच र अमेरिकामा सिकेको ज्ञानलाई सदुपयोग गर्दै अगाडि जाने इच्छाले सफलता पाओस् ।
आँखुखोला जलविद्युतको नाफा १३५.५१ प्रतिशतले बढ्यो, विद्युत बिक्री आम्दानीमा पनि वृद्धि (विवरणसहित)
फाइनान्समा जागिर खाने सुनौलो अवसर !
मल्टीपर्पस फाइनान्सले तोक्यो बुकक्लोज मिति
फरह्याण्ड बचतले बोलायो विशेष सभा, के-के छन् एजेण्डा ?
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको नयाँ बोनस दर सार्वजनिक
यी ६ वटा कम्पनी हकप्रद निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा, कुनको कति कित्ता ?
रिडी हाइड्रोपावरले सेयरधनीलाइ आकर्षक प्रतिफल दिँदै आएको छ : कुवेरमणि नेपालसँग कुराकानी
‘संघर्ष बुझ्या छु, लगानीकर्ता जोडीए लाखौंलाई स्वरोजगार बनाउन सक्छु’: युवा उद्यमी सम्राट
आइपिओमा लगानी गरेका ६८ कम्पनी डुबे, डमरू बल्लभ भने सधैं नाफामा (भिडियाे कुराकानी)
अपि पावरकाे हकप्रदमा किन लगानी गर्ने ? कार्यकारी संचालक न्याैपानेसँगकाे कुराकानी (भिडियाेसहित)
साल्ट ट्रेडिङले गर्यो बम्पर लाभांश घोषणा, नगद र बोनस सेयर कति ?
अपिकाे १६ औं र १७ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, १४ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव पारित
शेयर बजारमा करेक्सन, नेपाल बैंक लगानीकर्ताको रोजाइमा
रसुवागढी हाइड्रोपावरको नाफा बढ्यो (विवरणसहित)
युनाईटेड इदी मार्दीको आइपिओमा १२.३९ गुणा बढी आवेदन, पर्ने सम्भावना कति ?
सनराइज बैंकले गर्यो लाभांश घोषणा, नगद र बोनस कति ?
अपि पावरको दुई साधारणसभा आज, सेयरधनीलाई लाभांश कति ?